Ambatobe : Tovolahy nisarahan’ny sipany, maty namono tena – Midi Madagasikara
You Are Here: Home → Faits-Divers → 2015 → décembre → 2 → Ambatobe : Tovolahy nisarahan’ny sipany, maty namono tena
Ambatobe : Tovolahy nisarahan’ny sipany, maty namono tena
Tovolahy iray 20 taona nisarahan’ny olon-tiany no maty namono tena nitelina fanafody, omaly naraina, tetsy Ambatobe. Gaga ny fianakaviany niray trano aminy, fa vatana mangatsiaka no novantanin’izy ireo. Raha ny angom-baovao dia nanana olana tamin’ny sipany izay mpiara-mianatra aminy ihany, ity tovolahy namono tena ity, noho ny famoizam-po. Resaka hasarotam-piaro no fototry ny adin’ireto mpifankatia raha niara-nijery fampisehoana ara-java-kanto iray lehibe tao amin’ny Lapan’ny Kolontsaina sy Fanatanjahan-tena ny alahady hariva teo. Tamin’io fotoana io mantsy dia nisy hafatra (sms) mitory fitiavana nalefan’olona tamin’ny findain’ilay tovovavy. Rafitra ny fifamaliana ary nitohy tany ivelany ny ady.
Fanafody fonosana maromaro. Tezitra tsy nahafehy tena ilay tovolahy ka namono sy nikasi-tanana ny olon-tiany. Romotra tamin’ny fihetsiny ilay sipany, ka io alahady hariva io ihany dia rava ny tsena. Nanantena ity tovolahy fa hiravona ny olan’izy ireo ny alatsinainy tany am-pianarana, kanefa tsy nety niaraka taminy intsony ny olon-tiany. Latsa-panenenana sy nalahelo mafy izy ary nigogogogo nitomany tsy nety nampanginina rehefa tonga tany an-trano ny alina. Dia samy natory ny rehetra avy eo. Ny maraina vao samy taitra sy gaga nahita an’ity tovolahy tsy nisy aina intsony, ary mbola hita teny ambanin’ny loham-pandriany ny fonosana fanafody maromaro.
Rasoa 3 décembre 2015 at 9 h 59 min · Edit
vao 20taona ve rangah!!!tsssss
Mamy Ralay 3 décembre 2015 at 3 h 11 min · Edit
Mampalahelo ary tsy mora ny manoro ny tanora hiady sy hitolona @ ny olana ateraky ny fiainana : tsy fahombiazana @ fianarana, nilaozan’ny sipa (na lahy na vavy), voafitaka etsy sy eroa …
Tsara omena toky ny ankizy sy ny tanora fa tsy bedesina sy tsy henoina ! Mbola zaza anie ireo ary mahita 1° ny tsy fahita ê ! Atoro, ampianarina am-pahatakosiana ny fiainana izay tsy mora ary tsy misy andraso, … Ao ny manambitana, ao ny mafy saina sy fo, ao ny very finoana tsy arisaina, ao ny tsotrabe, …
Tena mila toky ny tanora ary tsy misy afaka manolotra izany ho azy afa-tsy ny raiamandreniny izay tsy “hanolo-bato mafana ho an’ny zanany”…
Tsy mbola fantany fa ny sipa (lahy na vavy) anie mahita foana ê ! Azo antoka fa tsy ho vadiany akory io … ! Mikarenjy sy miriaria eny izy dia mahita sy taitra ary tara … amin’ny tsy nampoiziny !
Vraiment dommage pour sa famille, ses parents ainsi que sa “sipa” qui peut avoir sur la conscience cette suicide !!! C’est affreux, horrible !
anit 2 décembre 2015 at 17 h 02 min · Edit
Oudryyy quel gachis